श्रीकृष्ण श्रेष्ठको यादमा कान्छी बनी मुस्ताङ पुगिन् श्वेता - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
श्रीकृष्ण श्रेष्ठको यादमा कान्छी बनी मुस्ताङ पुगिन् श्वेता
९ कात्तिक, काठमाडौं । आफन्त गुमाउनुको पीडा भोग्नेहरूलाई नै थाहा हुन्छ । अझ जीवनभर साथ निभाउने कसम खाएर वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएको केही महिना पनि नबित्दै आँखैअगाडि जीवनसाथी गुमाउँदाको पीडा भुलाउन परेको सकस नायिका श्वेता खड्कालाई भन्दा बढी कसलाई अनुभव भएको होला । अहिले उनी आफ्नो त्यही पीडा भुलाउन ‘कान्छी’ बनेर आउन लागेकी छिन् आफ्नै लगानीमा चलचित्र निर्माण गरेर ।
चलचित्र छायांकन गर्न ४८ दिन लागेको थियो । चलचित्रमा श्वेतालाई दयाहाङ राईले साथ दिएका छन् । नीर शाह, अनु शाह, प्रज्ज्वल सुजल गिरी र तेस्रोलिंगी अभियान्ता भूमिका श्रेष्ठलाई पनि प्रस्तुत गरिएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
Previousमतपत्र छपाइमा बबन्डर किन ? मतपत्रमा के हो मुख्य विवाद ?
Nextदुर्घटनामा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु